Qaab dhismeedka xukunka ee jarmalka
Saaxiibbo waad salaaman tihiin, boggayaga Qaab dhismeedka xukunka ee jarmalka Waxaa jira maqaallo badan oo la xiriira casharradiisa. Qaar badan oo ka mid ah asxaabteena waxay rabaan inaan casharradeena u dhigno mowduucyo ay ka mid yihiin qaab dhismeedka jumlada Jarmalka iyo dhismaha jumladaha Jarmalka.
Markaad codsato, waxaan ku liis gareynay qaab dhismeedka jumladaha Jarmalka iyo casharada dhisida jumlada min eber ilaa heer sare sida soo socota. Waxaad ka akhrisan kartaa casharradeena hoose si aad uga bilowdo shayga koowaad.
Markaad baarto casharradeena hoose, waxaad awood u yeelan doontaa inaad sameysid jumlado kala duwan oo Jarmal ah si fudud.
Waxaad u aqrisan kartaa qaabdhismeedka jumladaha Jarmalka iyo casharada dhismaha xukun Jarmal si isku xigxiga. Waxaan rajeyneynaa inaad si weyn uga faa'iideysan doontid mowduucyadeena lagu sharraxay afka Turkiga isbarbardhig.